Umvelisi kunye nomthengisi we Pet Pet URuiyi
Yenziwe ngentsimbi eyomeleleyo ngesiphelo esimnyama esimnyama; ukungena ngokungena emnyango; 2 i-latch-lock-bolt latches ekhuselekileyo.
Ukuzivocavoca ucingo lwezilwanyana zasekhaya ukuze ugcinwe lula. Ucingo lwesilwanyana sasekhaya nganye luza nezibonda zomhlaba ukuzikhusela emhlabeni xa zisetyenziswa ngaphandle. I-Step-Thru ucingo lwezilwanyana lubandakanya ukuzinza kwekona ukongeza ukuqina kunye nokugcina ukucwangciswa kocingo lwesilwanyana sasekhaya.
Umgangatho olungileyo, osebenzayo nolula, umthamo omkhulu wokuthwala, ubomi benkonzo ende, indibano efanelekileyo.
Kulula ukugcina kunye nokuThutha
Zilolonge ucingo lwezilwanyana zasekhaya Songa caba ukugcinwa okufanelekileyo. Ucingo lwesilwanyana sasekhaya nganye luza nezibonda zomhlaba ukuzikhusela emhlabeni xa zisetyenziswa ngaphandle. I-Step-Thru ucingo lwezilwanyana lubandakanya ukuzinza kwekona ukongeza ukuqina kunye nokugcina ukucwangciswa kocingo lwesilwanyana sasekhaya.
Ukuzivocavoca iPen ineepaneli ezi-8 ezixhumeneyo (ipaneli nganye 24W x 24H intshi) ukwenza indawo eyi-16 ye-SQFT | I-Playpen ilungele izinja ezincinci ukuya kwii-intshi ezili-16 ubude.
Ukudlala ngaphakathi / ngaphandle okuphathwayo ii-intshi ezingama-30 kunye nokuzilolonga ngepeni; izinja ukuya kwii-intshi ezingama-20 ubude.
Iiphaneli ezi-8 ezidityanisiweyo, nganye ilinganisa i-30 nge-intshi ezingama-24; yenza indawo ebiyelweyo eyi-16-square-foot.
Cwangcisa ngemizuzwana; vula nje, imilo, kwaye uqhagamshele-akukho zixhobo zifunekayo; Songa isicaba sokugcina ngokuhambelana.
Ipeni yokuzivocavoca ephathekayo ilungele ukusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle, i-e-idyasi emnyama yokukhusela i-e-idyasi ikhusela inja yokudlala kwizinto kunye nezibonda zomhlaba ezibandakanyiweyo zigcina ipeni ibethelelwe emhlabeni
Akukho zixhobo zifunekayo. Vula nje, imilo kunye nokudibanisa inja yokudlala kunye, ipeni yokuzivocavoca inokuseta kwimizuzwana kwaye isonge iflethi yokugcina okanye ukuhamba lula.
Umnyango wokungena uqulethe ii-latch-bolt latches ezimbini ezikhuselekileyo kwaye ubonelela ngokungena ngokulula kunye nokuphuma kwesilwanyana sakho-okanye kuwe xa ufuna ukubonelela ngononophelo njengokugcwalisa amanzi kunye nezitya zokutya.
Ngokukhawuleza kwaye kulula ukuhlangana
Skuthetha ukuba zityhila iipaneli kwaye uzicande kunye neziqeshana ezifakiwe. Qwalasela isilwanyana sakho esijikeleze imo engqukuva okanye isikwere ngemizuzwana.
Igama lebrand Imoto yezixhobo zeRuiyi
Igama Isixhobo sangaphandle semoto
Uluhlu lwezinto Ilaphu le-Oxford + umbhobho wentsimbi
Ubungakanani Ngama-82 * 56 * 2CM
isitayile Uhlobo lwaseMelika
Ukubamba Nyanga unyango
Ukupakisha Ingxowa enye yangaphandle
I-NW / GW 12KG / 13KG
Kwiindawo zasendle okanye zangaphakathi kunye neendawo ezinesithuba esikhulu, gcina izilwanyana zasekhaya ekuthinjweni ukuzikhusela ekubalekeni nasekulahlekelweni.
Okanye qhagamshelana nathi.
Sijonge phambili ekubeni ube ngumenzi wegatya elilandelayo.
Okulandelayo: Ivili DB
Ivili likaCaster, I-China i-PU Foam Isondo, DB Ivili, Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils, Isondo le-China PU, Umxube weKhonkrithi yase China,